म रामको भन्दा रावणको फ्यान हुँ : रेखा थापा
8th April 2016 | २६ चैत्र २०७२
फिल्म रामप्यारीको रिलिज हुने अघिल्लो दिन रेखा हिलिङ गर्दै थिइन घरमा। फिल्म प्रवर्द्धनको होडबाजीमा उनी थिइनन्। होटल द्वारिकाजमा भेटेर हामीसँग गफ्फिन उनी तयार भइन्। रिलिजअघि नै मोफसलले फिल्मको लगानी उठाइसकेको दावी गर्दै कन्फिडेन्ट मुद्रामा देखिएकी रामप्यारीसँग हामी पनि गफ्फिने मुडमा नै थियौं फरक शैलीमा। नेपाली फिल्ममा नायकको रुपमा आफूलाई स्थापित गरेकी रेखालाई सोझै सोधिएको थियो तपाईँलाई आफ्नो शरीरको कुन भाग मन पर्छ? केही क्षण गम खाँदै उनले उत्तर दिइन् प्रस्ट रुपमा। उनीसँगको पहिलोपोस्टका ऋषिकेश दाहाल र इलिट जोशीले गरेको अन्तरंग कुराकानी :
तपाईँलाई आफ्नो शरीरको कुन ‘पार्ट’ मन पर्छ? लभ्ली पार्ट अफ योर बडी?
ल, मैले यसरी त सोचेकै छैन। मलाई लाग्छ मेरो आँखा होला। किनभने मेरो आँखाबाट हरेक कुरा एक्सप्रेस हुन्छ। मैले जतिसुकै प्रिटेन्ड गरे पनि मेरो आँखाबाट थाहा हुन्छ। आँखाको लजिक पनि दुई/तीनवटा हुन्छ। कसैको नशालु हुन्छ। कसैको छुच्चो। मेरो आँखा एउटा सानो बच्चाको जस्तो छ। सानो नादान बच्चाको जस्तो। आफ्नो आँखा देख्दा मलाई माया लाग्छ। इन्टर्भ्युहरुमा म पतरपतर बोलिरहेको हुन्छु तर आँखा डिफरेन्ट हुन्छ।
अनि आफ्नो बानी चै के राम्रो लाग्छ ?
मेरो एउटा मात्र बानी राम्रो छैन। ममा कोमलता छ। दयालुपन छ। सबैभन्दा बढी भावुक हुने गर्छु। कोही पनि दुखी देख्न सक्दिनँ। त्यो मानिस एकछिन भए पनि खुसी भए हुन्थ्यो नि भन्ने लाग्छ।
भनेपछि इमोसनल हुने बानी छ?
हो। तर म त्यो लुकाउँछु। निरास मानिसहरुका अगाडि म कठोर रुपमा प्रस्तुत भएको हुन्छु। धत् ! यस्तो पनि हुने हो भनेर बोल्छु। तर उनीहरुको निरासपनले मलाई छोइरहेको हुन्छ।
केटा देख्दा तपाईँ कत्तिको इमोसनल हुनुहुन्छ?
(हाँस्दै) यो त ह्युमन नेचर हो। जसरी केटाहरुलाई राम्री केटी देख्दा फिल हुन्छ नि – वाउ व्युटिफुल। केटीहरुलाई पनि त्यसरी नै हुने गर्छ। ह्यान्डसम केटा देख्दा एक किसिमले – वाउ भन्ने हुन्छ। कस्तो राम्रो रहेछ यो भन्ने लाग्छ।
तपाईँको परिभाषामा ह्यान्डसम भनेको चै कस्तो हो ?
आँखाले मात्र हेर्दा गुड अपिरिअन्स। गुड लुकिङ।
मनले हेर्दा नि ?
आँखाले हेर्दामात्र गुड लुकिङहरु पनि व्याड पर्सन हुन सक्छन्। आत्माले फरक मानिस पनि खोज्न सक्छ। एकदमै ह्यान्डसम केटा खराब रहेछ भने? हराम रहेछ भने? फेरि त्यसको अग्नि परीक्षा लिनुपर्छ मैले।
तपाईँ नारीको नारा लगाउनुहुन्छ नि अहिले। त्यसमा तपाईँको स्वार्थ छ। नारीहरु त्यही दृश्य हेर्छन्। ग्वाँग्वाँ रुन्छन्।
होइन। मेरो फिल्म रुने खालको नै हुन्न। रुने होइन आँसु पुछ्ने खालको हुन्छ। धत्! रुन हुन्न भन्ने हुन्छ। हामी नारी यत्ति शक्तिशाली रहेछौं, यो पो रहेछ कुरा भन्ने बुझाउँछ मेरो फिल्मले।
तपाईँ सलकपुरबाट आएकी केटी। काठमाडौंका सब मर्दहरुलाई नामर्द बनाउनुभयो है
(लामो हाँसो) कसरी?
राजेश (हमाल)लाई छाड्ने हो भने कोही पनि स्थापित भएनन्। तपाईँ आफै हिरो बन्नुभयो हि म्यान जस्तो। हावा हुन्डरीजस्तै हुनुभयो।
हाहाहा (लामो हाँसो) आउँदै हावा हुन्डरी आएजस्तो! एक्टर भन्दा हुन्छ नि। अहिले यस्तो पो हुनुपर्छ छोरीमान्छे भन्नेहरु छन्।
तपाईँलाई बदमास भन्नेहरु पनि छन् नि ?
बदमास आजसम्म भनेको सुनेको छैन। चरित्रवान भएपछि कन्फिडेन्ट बढ्ने रहेछ। जो चरित्रवान हुन्छ र समाजलाई धमिल्याउने काम गर्दैन त्यो मानिसमा कन्फिडेन्स हुन्छ।
तपाईँको पूर्व पतिको नजरमा त तपाईँ बदमास हो नि?
उसको नजरमा पनि महान नै छु। विचार नमिल्दैमा बदमास त होइँदैन नि। तपाईँसँग मेरो विचार मिलेन भनेर मैले तपाईँलाई बदमास भन्न थालौं अब?
रेखामाथि गीत बन्छ। अब रेखाको जवानी भनेर फिल्म बनाउनु हुन्छ कि?
हाहाहा। ‘कलियुगकी राम रेखा’ भनेर बनाउनुपर्ला।
नारीहरु कोमलमात्र होइन, चण्डाल पनि हुन्छन् नि?
हुन्छन् चण्डाल पनि हुन्छन्। दयालु पनि हुन्छन्। तर थोरैमात्र हुन् चण्डाल। महाभारत र रामायण सबैमा नारी नै छन्। एउटा कुरा भनौं म रामभन्दा रावणको फ्यान हुँ। रावण 'हि म्यान' हो।
रामप्यारी बनाउने र खेल्ने अनि रावणको फ्यान हुने त?
रावणले त अर्काकी श्रीमती हरेर लग्यो। तर रामले आफ्नीको अग्निपरीक्षा लियो। त्यो त गलत हो नि। आफ्नी स्वास्नीमाथि अर्कालाई प्रुभ गर्न अग्नि परीक्षा?
तपाईँ सहरभन्दा गाउँमा बढी लोकप्रिय किन?
उहाँहरुको प्रतिनिधित्व पात्र भएर जस्तो लाग्छ। उहाँहरुकै आवाज लिएर आइरहेको जस्तो लाग्छ। म गाउँहरुतिर जाँदा उहाँहरुलाई म पर्दाको नायिका जस्तै मान्नुहुन्न। आफ्नै घरको छोरीचेली या दिदी बहिनीजस्तो लाग्छ उहाँहरुलाई। आफन्त भएको फिल हुने रहेछ। मेरा हरेक गतिविधिहरु उहाँहरुलाई थाहा छ। मेरो टिनएजदेखि आजसम्म उहाँहरुले मलाई हुर्काउनुभएको हो।
तपाईँ सलकपुर गाउँबाट निस्केको कति भयो ?
भयो १५ वर्षजति
कतिपटक फर्किनुभयो त आफ्नो गाउँ?
१०-१२ पल्ट पुगेँ होला। दसैंमा सँधै गइन्थ्यो। अहिले घर यहीँ छ।
काल्पनिक दृश्यको कल्पना गरौं। एउटा विश्वास गरेको मानिसले तपाईँसामु एउटी युवतीलाई बलात्कार गर्न खोज्दैछ। त्यतिखेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ?
सुरुमा त म सक्ड हुन्छु होला। पत्यार नै नलाग्ने गरी। त्यसपछि त्यसको गालामा मुक्का (कसिलो मुक्का देखाउँदै) हान्थेँ। रगत निस्कन्थ्यो होला सायद। अनि घरमा पुगेर पुछ भन्थेँ।
५/७ वर्षमा तपाईँ बुढी हुनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँको जिन्दगी के हुन्छ?
म बूढी हुन्न। पाको हुँदै जाने हो। एउटा कुरा नि मलाई रिस उठ्छ। मेरो बैंक व्यालेन्स यति धेरै छ भन्दा सान हुने रे अनि उमेर चैँ घटाउनुपर्ने? उमेर बढ्नु भनेको जिन्दगीको परिपक्वता बढ्नु हो नि। सृष्टिको महसुस गर्न पाउनु सानो कुरा होइन। कसरी बूढी भएँ भन्नु। मेरो मन आत्मा त कहिल्यै बूढो हुन्न नि- जिन्दगीभर। म यति पढेको उति पढेको भन्न रुचाउने अनि उमेर चैँ १६ वर्ष भन्ने? गर्वका साथ भन्न पर्‍यो नि म यति वर्षको भएँ भनेर।
तपाईँले कति फिल्म खेल्नुभयो?
सबैगरी १५० होला। सानो रोल र गीतमा मात्र देखिएको जोड्दा।
रामप्यारी आउँछे अब?
आउँछे। आज शुक्रबारबाट।
कति नम्बरको ट्याम्पु चलाइ त रामप्यारीले?
नम्बर त याद छ तर नम्बर छोपेका छौं। गाह्रो हुन्छ रे। तनाव हुन्छ रे।
गीत अरुको पनि सुन्नुहुन्छ कि आफ्नोमात्र?
मलाई अरुको मन पर्छ। नारायणगोपाल, सत्य राजभण्डारी, अरुणा लामाहरुको, किशोरकुमारहरुको।
रामप्यारी फिल्मबाट के अपेक्षा छ तपाईँको?
अपेक्षाभन्दा पनि प्रत्येक महिला पात्रहरुको मनस्थिति परिवर्तन होला कि भन्ने चाहेको छु। स्वदेशमा आफ्नै श्रम गरेर खाने मानिसलाई हेपाहा हिसाबले हेर्छन्। त्यो एकदमै गलत कुरा हो। त्यही काम विदेशमा गएर गर्दा चाहिँ ठूलो हुने। म फलानो देशमा छु भन्दा चैँ ठूलो हुने। जबकि यही काम उता गएर गरिरहेका हुन्छन्। कतिपय बेला मेरै देशका दिदीबहिनीहरु खाडी देशमा बेचिएका पनि सुनेको छु। उनीहरुको २०/२५ हजारमात्रै पनि तलब हुन्छ रे। त्यस्तो हुनुभन्दा स्वदेशमै बसेर आफ्नो परिवारसँग रहेर ससम्मान किन काम नगर्ने? एउटी टेम्पो चालक महिलाले २०/२५ हजार कमाउँदी रहिछिन् भने आफ्नै देशमा रहेर क्षमताअनुसारको कमाइ किन नगर्ने? क्षमताअनुसार काम मिल्छ भने स्वदेशमै बसौं। विदेशमा गएर दिदीबहिनीले यातना सहन नपरोस्।
तपाईँ व्यापारी पनि हो?
सपनाको व्यापार गर्नुहुन्छ सिनेमाबाट। रामप्यारी पनि एउटा सपना हो।
यो सपना होइन। यो हाम्रो समाजमा घटेको वास्तविकता हो। फिल्म सपना हो भने किताब के हो त?
किताब पनि एउटा सपना नै हो।
त्यसो हो भने रामप्यारी पनि किताब नै हो। मैले किताब लेखेको हो। मेरो श्रव्यदृश्य किताब हो।
तपाईँको बिजनेस भोलुम कत्रो होला?
मलाई लाग्छ नेपालभित्र धेरैले यो किताब पढ्नु हुनेछ। यो देशमा हरेक तहमा हामी ३३ प्रतिशत आरक्षणको राजनीतिमात्र घुसाइरहेका छौं। हरेक तप्कामा, संगठनभित्र वास्तवमा के भइरहेको छ त? मैले जुन पक्षलाई समेटेँ तिनलाई ३३ प्रतिशत चाहिएको रहेनछ त।
भोलुमको मात्र कुरा गरौ न? आदर्शको कुरा होइन।
आदर्श होइन। यतिको बिजनेस हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त मैले दिन सक्दिन नि त।
अपेक्षा त हुन्छ नि? लगानी गरिसकेपछि रिटर्नको कुरा हुन्छ त।
उपत्यका बाहिर नै मेरो लगानी उठिसकेको छ। मेरो फिल्म पहिल्यै बिक्री हुन्छ। अलरेडी मेरो फिल्मको लगानी उठिसकेको छ। तर, त्यो मेरो उद्देश्य होइन। ६० हलमा फिल्म रिलिज हुन्छ शुक्रबार। काठमाडौंभित्र मल्टिप्लेक्ससहित २० वटा हलमा लाग्छ।
मल्टिप्लेक्समा त दुई/दुई मात्र सो रहेछ त?
मल्टिप्लेक्समा धेरै हिन्दी राख्छन्। नेपालमा राष्ट्रियताको धेरै कुरा गर्छन् तर व्यवहारमा लागू गर्दैनन्।
रामप्यारीको बजेट कति?
६० लाख रुपैयाँ हो। कन्टेन्ट ट्याम्पु चालकमाथि छ। यो कथा यथार्थवादी हो त्यसैले खर्च कम भएको हो। सुटिङ गर्ने ठाउँ प्रायसः ग्यारेज र सडक भएकाले खर्च कम भएको हो।
फाइट पनि गर्छे रामप्यारीले?
प्रिमियर सो नै किन नगरेको त? किन प्रिभ्यु नगराएको?
फिल्म मासमा नगइकन के प्रिभ्यु गराउनु नि? तपाईँ एउटालाई मन नपर्ला तर मासलाई मन पर्न पर्‍यो नि। अडियन्स ठूलो कुरा हो मेरा लागि।
रिभ्यु गर्नेले गोद्लान भन्ने डरले प्रिमियर गराउनु भएन।
होइन। दर्शकहरुले हेरेपछि प्रिमियर गराउने हो। दर्शकको रेस्पोन्ससँगै।
यस हिसाबले तपाईँ सपनाको व्यापारी हो कि होइन?
पैसा कति छ त रेखासँग?
खान पुग्ने छ।
रेखालाई डर लाग्छ कि लाग्दैन। फिल्म रिलिज हुँदैछ दर्शकले बहिस्कार गरे भने?
त्यस्तो खालको डर सबैलाई हुन्छ। एकखाले धुकचुक धुकचुक हुन्छ। मैले बनाएको १३ वटा फिल्म भयो। हरेक फिल्म लाग्नुअघि रात धुकचुक धुकचुक हुन्छ। म आत्तिन्छु र यसरी नै गफ गरेर भुल्न चाहन्छु।
रेखाको लत केमा ?
एक्टिङमा मात्र। अल्कोहल खान्न।
अहिलेसम्मका फिल्ममध्ये सबैभन्दा बढी सन्तुष्ट कुनमा? रामप्यारी छाडेर।
काली र कसले चोर्‍यो मेरो मन।
कसले चोर्‍यो त तपाईँको मन?
अन्तर्वार्ताको लागि पूरै तयार भएर आउनुभएको छ है।
केही पूर्व तयारी होइन। जेसुकै सोध्नुस् न जवाफ दिन सक्छु।
रेडिमेड एन्सर आइरहेको छ त।
होइन। सोध्नुस् त को हिरोहिरोइन मन पर्छ भनेर।
ल भन्नुस त आफैँ, कुन हिरोइनसँग इर्श्या छ?
सपोज तपाईँले सोध्नुभयो। मेरो उत्तर हो रेखा थापासँग।
फेरि तयारी उत्तर नै आयो। यो पनि रेडिमेड एन्सर हो।
तपाईँले त्यसो भन्न नमिल्ला।
रेखा थापालाई मोस्ट आर्टिकुलेट मान्नुपर्छ। आफैलाई मात्र माया गर्नेजस्तो भयो।
हो त अब आफैँलाई माया गर्ने हो। पहिले आफूलाई माया गर्ने हो अनिमात्र अरुलाई। आजसम्म मलाई सोधिएको छैन तर सोधियोस् भन्ने लाग्छ रेखा थापा कसको फ्यान हो? आजसम्म फ्यान बन्न लायक पाएको छैन। म पात्रका हिसाबले काली, दुर्गा र रामप्यारीको फ्यान हो। एक्टर हिरोइज्ममा म हिरो देख्दिन। पर्दामा मात्र भएर भएन रियल जीवनमा पनि हुनुपर्‍यो।
प्रचण्डसँग सडकमै नाच्नुभो, तपाईँ प्रचण्डको फ्यान हो?
हो म प्रचण्डको फ्यान हो। अहिले पनि हुँ।
केपी ओलीको पनि फ्यान होला नि
हो। उहाँको टुक्का मन पर्छ मलाई।
प्रचण्डको चै के मन पर्छ?
उहाँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अलिकति संगठनभित्र र पारिवारिक झमेलामा फसेर गर्न सक्नु भएको छैन।
बिग्रनुभयो? परिवारवादमा लाग्नुभयो?
बिग्रेको त होइन तर परिवारवादमा लागेको हो। देश हाँक्ने नेताले सम्पूर्ण जनता आफ्नो सन्तान हो भनेर नेतृत्व गर्नुपर्ने हो। यसले अरुलाई पनि झकझकाउँथ्यो।
तपाईँलाई कतिले पुग्छ? थप पैसा बढेको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि भयो होला है?
कस्सम, पैसाकै पछि लागेको भए फिल्ममै मात्र लाग्थेँ र। फिल्म नै खेल्नुपर्थ्यो र। यहाँभन्दा बढी विदेशमा हुने थियो होला नि।
प्रचण्डसँग नाचेको बेला आर्थिक सहयोग पनि गरेको भन्ने सुनिएको थियो नि?
मैले (हाँसो) होइन। हैन हैन। नभए नि हो भन्दिउँ त (लामो हाँसो)… अनि प्रचण्डले रेखाजी आराम हुनुहुन्छ? टिकट दिउँला नि अर्को पाला भनेर भन्नुहोला भन्ने। कल्पनामा जे जे कुराकानी गरे नि भइगो नि।
प्रचण्डसँग नाच्न चै कसरी अभिप्रेरित हुनुभयो?
सभामा माओवादी कार्यकर्ता भए पनि मैले तिनमा आफ्ना दर्शक देखेँ। मैले माओवादी कार्यकर्ता देखिनँ। त्यो सभामा प्रचण्ड नायक हुनुहुन्थ्यो। अनि नायकलाई नचाउन रमाइलो हुन्छ भनेर उहाँलाई नचाएको हो मैले।
तपाईँको र छविको सम्बन्ध…
(कुरा बीचमै रोक्दै)। फोटो खिच्न जाउँ न।
पत्रकारलाई रेखाले फनफनी घुमाउने गर्छिन् भन्छन् नि?
(हाँस्दै) धत् कहाँ घुमाउनु!